द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | अगस्त 16, 2018 | कार्यालय
एक भाषाबाट अर्को भाषामा पाठको अनुवादको रूपमा, यो अनुभवी अनुवादक प्रयोग गर्न अनुशंसा गरिन्छ कि पूर्णतासँग नजिकको अनुवाद सुनिश्चित गर्नुहोस्। सीमित विकल्प दिईयो यो विकल्प सम्भव छैन, अनलाइन अनलाइन उपकरणहरूको प्रयोगलाई विचार गर्न सकिन्छ। यदि तिनीहरू एक व्यावसायिक अनुवादकको रूपमा राम्रो हुँदैन भने, उनीहरूले पनि मूल्यवान सेवा प्रदान गर्छन्। केही कमजोरीहरूको बावजूद, अनलाइन अनुवाद उपकरणले थप सान्दर्भिक अनुवादहरू प्रदान गर्न ठूलो सुधार देखाएका छन्। त्यसैले हामीले तिनीहरूको गुणको विचार प्राप्त गर्न र द्रुत तुलना गर्नको लागि सर्वोत्तम अनलाइन अनुवाद उपकरणहरूको मूल्यांकन गर्न खोज्यौं।
DeepL अनुवादक: पाठ अनुवाद गर्नका लागि उत्तम अनलाइन उपकरण
डीपीएल एक बुद्धिमान स्वचालित अनुवादक हो र बिना कुनै पनि बिना नि: शुल्क मुफ्त अनलाइन अनुवादक। अनुवादहरूले उनीहरूलाई अन्य अनलाइन अनुवादकहरूको टाढाबाट टाढा प्रस्तुत गर्दछ। यसको प्रयोग सरल र तुलनात्मक छ अन्य अनलाइन अनुवाद उपकरणहरूको। साइट फारममा अनुवाद गर्नको लागि पाठ टाइप गर्नुहोस् वा टाँस्नुहोस् र अनुवाद प्राप्त गर्न लक्षित भाषा छनौट गर्नुहोस्।
डीपले अनुवादकले हाल अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, डच र पोलिस सहित भाषाहरूको मात्र एक सीमित संख्या प्रदान गर्दछ। तर, यो अझै पनि डिजाइन अन्तर्गत छ र चाँडै, यो मन्डारिन, जापानी, रूसी आदि जस्ता अन्य भाषाहरूमा अनुवाद गर्न सक्षम हुनुपर्छ। यद्यपि, यो लगभग एकदम सही अनुवाद र अन्य अनुवाद उपकरणहरू भन्दा बढी मानवीय गुण प्रदान गर्दछ।
डीजीएलमा केही फ्रान्सेलीको फ्रान्सेली वा अर्को भाषामा अर्को भाषा पछि, हामी छिट्टै थाहा पाउँछौं कि यो राम्रो छ। यो मूल हो र यस सन्दर्भमा सम्पादित शाब्दिक अनुवादहरू होइन। DeepL अनुवादकसँग एक विशेषता छ जुन तपाईंलाई अनुवादमा शब्दमा क्लिक गर्न र सममोदनका लागि सुझावहरू प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
यो सुविधा उपयोगी र व्यावहारिक छ कि अनुवाद त्रुटिहरु को लागी, त्यसैले तपाईं अनुवादित पाठमा शब्दहरू थप्न वा मेट्न सक्नुहुन्छ। चाहे यो कविता, टेक्निकल कागजात, अखबार लेखहरू वा कागजातहरूको अन्य प्रकारहरू हो, डीपीएल सर्वोत्तम नि: शुल्क अनलाइन अनुवादक हो र उत्कृष्ट परिणाम पाउँछ।
Google अनुवाद, सबैभन्दा प्रयोग गरिएको अनुवाद उपकरण
गुगल अनुवादहरू प्रयोग गर्नको लागि सबै भन्दा लोकप्रिय अनलाइन अनुवाद उपकरणहरू मध्ये एक हो। यो बहुभाषी अनुवाद उपकरण यसको अर्थको उचाइमा अनुवादित पाठहरूको गुणस्तरसँग छ, तर डीडीएलको रूपमा राम्रो छैन। Google अनुवादले 100 भाषाहरू भन्दा धेरै प्रस्ताव गर्दछ र 30 000 चिन्हहरू एक पटकमा अनुवाद गर्न सक्षम छ।
यदि यो बहुभाषी अनुवाद उपकरणमा धेरै कम गुणस्तर अनुवादहरू प्रस्तावित भएमा, हालैका समयहरूमा धेरै विकसित गरिएको छ एक भरोसेमंद अनुवाद साइट बन्न र संसारमा सबै भन्दा प्रयोग गरिएको साइट बन्न। एक पटक प्लेटफर्ममा, केवल पाठ विकल्प प्रविष्ट गर्नुहोस् र अनुवाद उपकरण स्वचालित रूपमा भाषा पत्ता लगाउँदछ। तपाईले साइटको URL को संकेत गरेर वेब पृष्ठ अनुवाद गर्न सक्नुहुनेछ।
यसरी, Google ले स्वचालित रूपमा Google Chrome एक्सटेन्सन इन्जिनमा Google Translate एक्सटेन्सन थपेर वेब पृष्ठलाई स्वचालित रूपमा अनुवाद गर्न सक्दछ। तपाइँको पीसी वा स्मार्टफोनमा कागजातहरू अनुवाद गर्न सजिलो छ। हामी धेरै प्रकारका ढाँचाहरू जस्तै PDF, Word फाइलहरू अनुवाद गर्न सक्छौं र हामी एक पलमा फोटोमा शब्दहरू पनि अनुवाद गर्न सक्छौं।
Google को आत्मामा विश्वासी, यो अनुवादक को उपयोग को एकदम आसान र एक महान दृश्य सादगी हो, यो विज्ञापनहरु या अन्य विचलनहरु लाई लागू गर्दैन। अङ्ग्रेजी-फ्रान्सेली र अन्य भाषाहरूको अनुवाद अत्यधिक मात्रामा छिटो छ र पाठ प्रविष्टि गरिएको रूपमा लिन्छ। एक उपलब्ध स्पिकरले तपाईंलाई स्रोत पाठ सुन्नु वा उत्कृष्ट phrasing मा अनुवादित भाषा सुन्न अनुमति दिन्छ। गुगल अनुवादले प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुवादित पाठमा केहि शब्दहरू क्लिक गर्न र अन्य अनुवादहरूबाट फाइदा लिन अनुमति दिन्छ।
एक हिज्जे र व्याकरण परीक्षक पाठमा अनुवाद गर्न मिल्दो हिज्जे शब्दहरूलाई सही गर्न सम्बद्ध छ। हजारौँ अनुवादहरूको डेटाबेसको साथ, गुगल अनुवादले सधैं सबै भन्दा राम्रो अनुवाद प्रस्ताव गर्न प्रबन्ध गर्दछ। प्रतिक्रियाको लागि धन्यबाद यो दिन राम्रो बनाउन सम्भव छ, जसले अझ शक्तिशाली अनुवादहरू प्राप्त गर्न सम्भव बनाउँछ।
माइक्रोसफ्ट अनुवादक जसले यसको नाम सुझाव दिन्छ बिल गेट्सको फर्मद्वारा प्रस्तावित छ। यो एक आवश्यक उपकरण बन्न र अन्य इन्टरनेट अनुवाद सफ्टवेयर dethrone हुन चाहन्छ। यो अनुवादक अत्यन्त शक्तिशाली र चालीस भाषाहरू भन्दा बढी अनुवाद गरिएको छ। माइक्रोसफ्ट ट्रांसलेटरले एक प्रत्यक्ष कुराकानी सुविधा प्रदान गरेर अलग गर्दछ र अरू भाषा बोल्ने व्यक्तिसँग लाइभ कुराकानीलाई अनुमति दिन्छ।
यो मूल प्रकार्य धेरै सजिलो छ र अन्य भाषाहरू बोल्ने व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दछ, धेरै प्रवाह। माइक्रोसफ्ट अनुवादक एन्ड्रोइड र आईओएसमा अनुप्रयोगको रूपमा उपलब्ध छ। एक अफलाइन प्रकार्यले प्रयोगकर्ताहरूले जडान बिना टेक्स्ट अनुवाद गर्न अनुमति दिन्छ। अनुप्रयोगको यो अफलाइन मोड केवल राम्रो छ किनकी यो इन्टरनेटमा जडान भएको थियो र निःशुल्क डाउनलोड गर्न भाषा प्याक प्रदान गर्दछ।
यसैले विदेशी देशको यात्राको दौरान स्मार्टफोनमा स्मार्टफोनको साथ यात्रा जारी राख्न सम्भव छ। माइक्रोसफ्ट अनुवादकले आईओएसमा एक लेख पहिचान इन्जिन पनि समावेश गर्दछ जसले तपाईंलाई कुनै पनि पाठ वा कागजातलाई विदेशी भाषामा अनुवाद गर्न अनुमति दिन्छ।
यो सफ्टवेयर एक ग्राफिक डिजाइन प्रदान गर्दछ जुन दुवै सरल र अवर्गीकृत छ। यसको अनुवादको राम्रो गुण निश्चित रूपमा प्रतिक्रिया दिने संभावनाको कारण हो। Google अनुवादक जस्तै, यो स्रोत भाषा पत्ता लगाउन र प्रस्तावित अनुवादहरूको सुन्नको लागि मौका दिन सक्नुहुन्छ।
फ्रान्स अनुवादको लागि रिर्सो
फ्रान्समा विदेशी भाषा वा फ्रान्सेली भाषाबाट विदेशी भाषामा सजिलैसँग अनलाइन पाठ अनुवाद गर्न, रिर्सोको अनुवाद उपकरण हो जुन पहिले प्रयोग गर्नुपर्दछ। यो अनलाइन अनुवाद सेवा मुख्य रूपमा फ्रान्सेलीमा आधारित छ र फ्रान्समा टेक्स्ट अनुवाद गर्ने आठ भाषाहरु मध्ये एक र अनुवाद र भिडीयो अनुमति दिन्छ। यद्यपि रिवर्सोले केवल नौ भाषामा अनलाइन पाठलाई अनुवाद गर्छ, यो अन्य इन्टरनेट आधारित अनुवाद सफ्टवेयरको रूपमा प्रभावशाली छ र यसको एकीकृत सहयोगी शब्दकोशसँग बेनेमिक अभिव्यक्तिहरूको अनुवादमा अझ प्रभावशाली छ।
रेर्स्कोओले प्रस्ताव प्रदान गर्दछ कि एक धेरै आकर्षक पेज जो अर्गोमेनिक्स को कमी छैन र लगातार विज्ञापनहरु लाई प्रयोगकर्ता को विचलित गर्छन। यो एक गुणस्तर अनुवादक रहेको छ, अनुवादित पाठहरू तुरुन्तै देखा पर्छन् र साइटले अनुवादलाई सुन्नको लागि अवसर प्रदान गर्दछ। प्रयोगकर्ताले टिप्पणी पोस्ट गरेर योगदानको सुधार गर्न योगदान पुर्याउन र अनुवादमा आफ्नो राय व्यक्त गरी।
रिड टीमहरूमा काम गर्नुहोस् र टाढा टाढा स्ल्याकसँग। वास्तविक समयमा संचार गर्नुहोस्
WorldLingo धेरै भन्दा बढी भाषाहरूमा ग्रंथ अनलाइनहरूको अनुवाद गर्ने एक उपकरण हो र सबैभन्दा राम्रो अनलाइन अनुवाद साइटहरूको गम्भीर प्रतियोगी हो। यद्यपि यो सही अनुवाद प्रस्तुत गर्दछ भने, यो अझै पनि सर्वोत्तम संग प्रतिस्पर्धा गर्न को लागि धेरै लेवे छ। WorldLingo सँग एक स्पष्ट डिजाइन छ र स्वचालित रूपमा स्रोत भाषा पत्ता लगाउँदछ।
साइटले औसत अनुवाद गुणस्तरसँग रोचक वाक्यांशहरू पनि प्रस्ताव गर्दछ। यसले कुनै पनि प्रकारको कागजातहरू, वेब पृष्ठहरू र इ-मेलहरू अनुवाद गर्न सक्छ। यसले यी लिंकहरूको 13 विभिन्न भाषाहरूमा वेब पृष्ठहरू अनुवाद गर्न सक्छ। मेलहरू अनुवाद गर्न, यो प्रेषकको ठेगाना दिन पर्याप्त छ र विश्व लिंगो सिधा अनुवादित पाठ पठाउनुको चार्जमा छ।
यो अनुवाद उपकरण प्रयोग गर्न सजिलो छ, धेरै सुविधाहरू समावेश गर्दछ र बहु ​​फाइलहरू समर्थन गर्दछ। तर यसको नि: शुल्क संस्करणमा, कसैले केवल 500 शब्दहरूलाई अधिकतममा अनुवाद गर्न सक्दछ।
याहू बाबिलोन अनुवाद
याहूको अनलाइन अनुवाद उपकरणलाई बेबिलोन सफ्टवेयरले प्रतिस्थापन गरेको छ। यो सफ्टवेयरले लगभग 77 भाषाहरूमा अनुवाद प्रदान गर्दछ। यो लामो पाठहरूको सट्टा शब्दहरू अनुवाद गर्नको लागि उत्कृष्ट एक-अफ शब्दकोशको रूपमा प्रसिद्ध छ। सामान्यतया, यो यसको अनुवादको गुणस्तरको लागि बाहिर खडा छैन र धेरै ढिलो छ। थप रूपमा, हामी साइटको एर्गोनोमिक्स कम गर्ने आक्रमणकारी विज्ञापनहरूको अधिकताको निन्दा गर्छौं। बेबिलोन अनुवादक स्मार्टफोन र अन्य डिजिटल उपकरणमा एकीकृत गर्न सकिन्छ। यसले तपाईंलाई कागजात, वेबसाइट, ए मा शब्द वा वाक्यांश चयन गर्न अनुमति दिन्छ इमेल तत्काल अनुवाद प्रदान गर्दा अनुवाद गर्न। अनुप्रयोगले धेरै अनलाइन शब्दकोशहरू प्रयोग गर्दछ र अफलाइन प्रयोग गर्न सकिँदैन। यदि तपाईं 3G, 4G वा Wifi नेटवर्कमा जडान हुनुहुन्छ भने मात्र यो प्रयोग गर्न सकिन्छ।
रिड Google खोजी प्रो बनें
Systran, अनलाइन अनुवाद उपकरण
यो अनलाइन अनुवाद सफ्टवेयरले 15 भाषाहरूलाई यसको स्टकमा गणना गर्दछ र यसमा 10 000 चिन्ह क्षमता छ। यो विज्ञापन बिना एक सुखद ergonomics प्रदान गर्दछ। सफ्टवेयरसँग लक्ष्य भाषामा एकदम औसत अनुवाद गुणस्तरको साथ पाठको सामान्य अर्थ प्रस्तुत गर्न क्षमता छ। सबै अन्य अनलाइन अनुवाद उपकरणहरू जस्तै, सिस्ट्रानले वेबपेज अनुवाद जस्तै धेरै सुविधाहरू प्रदान गर्दछ।
तर, यो पाठ वा वेब पेजको 150 शब्दहरूमा यसको अनुवादलाई सीमित गर्दछ। यो सीमाभन्दा बाहिर जानुहोस्, तपाइँसँग एक भुक्तानी संस्करणमा लगानी गर्नु पर्छ। सफ्टवेयरले उपकरण र इन्टरनेट एक्सप्लोरर अनुप्रयोगहरू उपकरणपट्टीको रूपमा एकीकृत गर्दछ। अनलाइन पाठ, वर्ड, आउटलुक, पावरपोइन्ट र5एमबी भन्दा कम, अनुवाद गर्न सकिन्छ, र पहिले नै मेग्याबी सम्म अनुवाद गरिएको पाठहरू सजिलै सम्पादन गर्न सकिन्छ।
यो उपकरण बाबुलको साथ प्रतिस्पर्धामा छ र रैंकिङको तल्लो तहमा छ, दुईवटा सफ्टवेयर लगभग सबै समान सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। हामी केहि शब्दहरू बीच स्पेसको स्वत: उन्मूलन हटाउन सक्छौं, विशेष गरी यदि यो अनुवाद गर्न एक पाठ र पेस्ट हो। यो कहिलेकाहीँ कि शब्दहरू सँगै रहन्छ, सिस्ट्रान प्रायः यो परिकल्पनाको शब्द पहिचान गर्दैन र यसलाई छोडेर यो यसलाई अनुवाद गर्न प्रयास नगरेको छ। फलस्वरूप, प्रयोगकर्ताले मैन्युअल रूपमा स्पेसहरू थप्न आवश्यक छ र त्यसपछि अनुवाद सुरु गर्न आवश्यक छ।
शीघ्र अनुवादक एक राम्रो विश्वसनीय अनुवाद साइट एक औसत माथि औसत अनुवाद गुण संग हो। यसले स्वचालित रूपमा अंग्रेजी र 15 अन्य भाषाहरूमा अनुवाद गर्न अनुमति दिन्छ। यो अनुवादक मूलतः पेशेवर, व्यापार र निजी प्रयोगकर्ताहरुको लागि डिजाइन गरिएको थियो। साइटको पृष्ठको ergonomics व्यावहारिक र पृष्ठ र कार्य बटनहरूमा केही विज्ञापनहरूसँग प्रयोग गर्न सजिलो छ, स्पष्ट, राम्रो स्थानमा र राम्रोसँग हाइलाइट गरियो।
जब उसले एक शब्दलाई चिन्ता गर्छ भने उसले पहिचान गरेन भने, प्रोम्प्ट ट्रान्क्लेटरले यसलाई अहिल्यै रातोमा जोड दिन्छ र सुधारको लागि सुझावहरू प्रदान गर्छ। प्रोम्प्ट ट्रान्जिलेटर बहुभाषी अनुवाद उपकरण हो जुन विन्डोजको लागि विकसित गरिएको छ जुन पाठ, वेब पृष्ठहरू, PDF फाइलहरू, आदि अनुवाद गर्न सक्दछ। यो Word, Outlook, Excel, PowerPoint वा FrontPage सँग मिल्दो छ। यसको आवश्यकता अनुसार अनुवाद सेटिंग्स परिमार्जन गर्न सजिलो छ।
पाठ वा पृष्ठ अनुवाद गर्नको लागि सबैभन्दा राम्रो अनलाइन उपकरण अगस्ट 16th, 2018Tranquillus
अघिल्लोएक पेशेवर सारांश कसरी लेख्नु हुन्छ?
निम्नजानकारी कसरी समिकरण गर्न सिक्नुहोस्, यो प्राप्त गर्न सबै सुझावहरू
तपाईंको चहचहाना प्रोफाइल सफा गर्ने र तपाईंको छविको संरक्षण कसरी गर्ने?
Windows 10 मा किबोर्ड सर्टकट कसरी बनाउने?